Ifenitshala yakudala, iBhedi yakudala kunye noMenzi weSofa | ujames Bond
Ifanitshala kaJames Bond ibigxile kwifanitshala yodidi oluphezulu iminyaka eli-18.
Ifanitshala yeClassic eNtofontofo
Itafile yeKofu yeClassic
IKhabhinethi yeTV yeClassic
Itheyibhile esecaleni kwebhedi
Itheyibhile yokuDla yeClassic
Isitulo sokutyela seClassic
Isitulo sokuzonwabisa seClassic
Gxininisa kwifenitshala yakudala yodidi oluphezulu
Olona khetho lulungileyo kubantu abaphumeleleyo
Ifenitshala yesofa yeClassic James Bond 14k yegolide kunye nomthi oqinileyo okhanyayo omdaka ngesofa A2820
Ifenitshala kaJames Bond igxile kwifanitshala yakudala yodidi oluphezulu kwaye ivelisa umgangatho ophezulu kunye neeseti zesofa ezitofotofo. Le seti yesofa yobutofotofo yenye yeempawu zefanitshala ezithengiswa kakhulu zikaJames Bond kwaye isetyenziswa ngoosaziwayo abaninzi, abantu abadumileyo kunye nezihandiba. Kuba inomtsalane kakhulu, ikwanobunewunewu kakhulu, inokuba kuhle kakhulu ukubonisa ubuni kunye newonga lomnini.Ifenitshala kaJames Bond ithengiswa kumazwe angaphezu kwama-60 phesheya kolwandle, besisebenza nzima, sinethemba lokuba abasebenzisi abaninzi kwihlabathi liphela banokufumana ifanitshala yethu ye-James Bond eyenziwe ngononophelo.
Ifenitshala ye-sofa ye-Classic ye-14k yegolide kunye negolide yomthi oqinileyo&champagne A2819 James Bond
INKCAZOJames Bond Classic sofa ifenitshala 14k igolide kunyeigolide yomthi oqinileyo &iChampagne A2819IINKCUKACHA ZEMVELISOIzinto: Frenchbeech\_Leather\_14kgold Izinto zokuhlala: Isikhumba Umbala Wesikhumba: Umdaka okhanyayo Umbala wokhuni: Ishampeyini
Uyilo lwebhedi ye-James Bond ye-Classic 14k yegolide kunye nomthi oqinileyo Ivelvet eluhlaza okwesibhakabhaka JP644
James Bond Classic yombane ejikeleza itafile yokutyela kunye neenkuni eziqinileyo ezinepeyinti yeresin yepiyano eBrown JF522
INKCAZELOIgolide yeClassic Brown kunye nomthi oqinileyo onepiyano resinipeyinta ombane ngeenxa yokutyela ekwaziyoIINKCUKACHA ZEMVELISOIzinto: I-beech yesiFrentshiUbungakanani: 220W×220D×76H 300W×300D×76H 380W×380D×76HUmbala wokhuni: NTSUNDU
Ifenitshala yesofa yanamhlanje eyi-14k yegolide kunye nomthi oqinileyo Ukukhanya okungwevu A2803
I-James Bond yale mihla ye-sofafanitshala ye-14k yegolide kunye nomthi oqinileyo Ukukhanya okungwevu A2803.
Ifenitshala yesofa yakudala eyi-14k yegolide kunye nomthi oqinileyo omhlophe / ubunzulu obuluhlaza / omdaka / JF508
Ifanitshala yesofa kaJames Bond yakudala eyi-14k yegolide kunye nomthi oqinileyo omhlophe / ubunzulu obuluhlaza / omdaka / JF508.
Iseti yesofa yeClassic iyila isitayile sobunewunewu 14k yegolide kunye nomthi owomeleleyo omdaka oPhezulu JF508
Iseti yesofa yakudala kaJames Bond iyila isitayile sobunewunewu i-14k yegolide kunye nomthi oqinileyo oluhlaza oluhlaza JF508.
Uyilo lwesofa kaJames Bond yeClassic 14k yegolide kunye nolwandle oluluqilima oluluhlaza A2825
Ifanitshala kaJames Bond ibigxile kubunewunewu obukumgangatho ophezulu wefanitshala yakudala iminyaka eli-18. Abathengi abaninzi bathi ifanitshala kaJames Bond yenza ifanitshala yakudala efana kakhulu nefenitshala yakudala yaseItali. Ewe, sithumela iqela lethu lemveliso kunye neqela loyilo e-Itali minyaka le ukufunda itekhnoloji yemveliso kunye noyilo loyilo lwefenitshala ye-Italian classical, ukuze ifenitshala yeklasikhi ingcono iziswe kubathengi kwihlabathi liphela.Iseti yethu yesofa yakudala idume kakhulu kuba iphathwa kakuhle kuzo zonke iinkcukacha, ibonisa imvakalelo ethambileyo, imvakalelo etofotofo kunye nemvakalelo yakudala.
I-James Bond Furniture igxile kwifanitshala yodidi oluphezulu iminyaka eli-18, kwaye iimveliso zayo zithengiswa kumazwe angama-52 kwihlabathi liphela. Khetha ngononophelo izixhobo ezikumgangatho ophezulu, usebenzisana neqela loyilo elinamava kunye neqela lemveliso, kwaye uzise ubuchwephesha bemveli base-Italiya eTshayina.
Kugqitywe ngempumelelo iiprojekthi ezininzi ezibalaseleyo
1. IProjekthi yoSapho lwasebukhosini lwaseMalaysia
2. Iprojekthi yeNdlu kaMongameli e-Afrika
3. Iprojekthi yehotele eneenkwenkwezi ezintandathu eDubai
4. Iprojekthi yenkampani yoyilo eyaziwayo eDubai
5. Iprojekthi yeMvumi edumileyo yeVilla
6. Ngaphezulu kwe-100,000 yeeprojekthi, ezifana neprojekthi ye-villa ye-movie edumileyo
Iprojekthi yabathengi baseDatshi-ifanitshala yakudala evela kwiFanitshala kaJames Bond
I-sofa yeklasikhi ekhethwe ngumthengi waseDatshi yindlela ethengiswa kakhulu ye-James Bond Furniture. Ithengiswe iminyaka eyi-18, kwaye ingcamango yayo yoyilo ithathwe kwi-necklace yowesifazane omhle. Imilo intle kwaye inencasa. Idityaniswe ne-premium ye-Italian toppings ehlanganiswe ngesikhumba senkomo, ixabiseke kakhulu, lukhetho olukhulu!Abathengi baseDatshi basebenzisa iitafile ezimbini zokuhlobisa, ezinokudlala umphumo omuhle kakhulu wokuhlobisa, ukwenzela ukuba indawo ethile ibonakala inomoya!
Iprojekthi yabathengi baseShanghai-ifanitshala ekumgangatho ophezulu yakudala evela kwifanitshala kaJames Bond
Amakhaya amatsha abathengi baseShanghai zonke ziimveliso zothotho lwefanitshala yeJames Bond. Kusetyenziswa isuti yesofa enobutofotofo eluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye isitulo sokutyela esinombala ofanayo siyahambelana. Ibhedi yeklasiki kwigumbi lokulala nayo ikumgangatho ophezulu.Ifenitshala ye-James bond lukhetho lwabantu abaphumeleleyo, umgangatho ophezulu, ifenitshala yeklasi kunye nesitayela, inokunyusa kakhulu umoya wekhaya kunye nokukwazi kunye namalungelo omnini!
Umgangatho oPhezulu waseBritane wasekhaya waseTshayina-uJames Bond weFanitshala yeFanitshala yakudala-
Ifanitshala yodidi oluphezulu oluphezulu, ifanitshala yeklasikhi kaJames Bond ngummeli. Sizibophelele ekudaleni umgangatho ophezulu, ifanitshala yakudala eyomeleleyo, ukwaneliseka kwabathengi, yinto esiyisukelayo. Ukusuka kwimathiriyeli ekumgangatho ophezulu ukuya kwimveliso egqwesileyo, sinemigangatho engqongqo, ukuze yonke intwana yefanitshala yodidi lukaJames Bond yenziwe ibe sisiqwenga sempahla ekumgangatho ophezulu.
Ubuchwephesha bukaJames Bond abavelisi beProjekthi enkulu yeVilla
Ubuchwephesha bukaJames Bond abavelisi beProjekthi enkulu yeVilla. Ifanitshala ye-classic kaJames bond izibophelele ekudaleni ifenitshala yakudala ekumgangatho ophezulu. Singenise imathiriyeli ekrwada kwaye sazisa iindlela zokuvelisa zaseItali. Ukongeza, siqeshe iinkosi ezininzi zamagcisa aneminyaka eyi-10-20 yamava ukuba asebenzise ubuchule obusulungekileyo bokukrola okwenziwa ngesandla ukubonisa ixabiso lefenitshala yakudala. Ifenitshala yakudala yaseJames Bond igqibe ngempumelelo iiprojekthi ezininzi zevilla, iiprojekthi zehotele kunye neeprojekthi zezindlu. Besiphucula umgangatho weemveliso kunye nenkonzo yabathengi.
James Bond Ifenitshala
I-James Bond Furniture yasekwa ngo-2003 kwindawo edumileyo yemveliso yefanitshala yelizwe-- idolophu yaseLongJiang, isithili saseShunde, isixeko saseFoshan, esigubungela ummandla ongaphezulu kwama-50,000 eemitha zesikwere seemitha, eyimveliso, intengiso yendlu ephezulu enesofa yaseYurophu. , itheyibhile, itiyibhile yeemveliso zeemveliso zamashishini abucala. Kwiminyaka eyi-18, iFanitshala kaJames Bond ibambelela kwimigangatho yokuziphatha engaguqukiyo, iZibophelele ekwamkelweni kwezithethe, inkcubeko yeshishini elubala kunye nemodeli yophuhliso oluzinzileyo, kunye nokuqondwa kolu shishino, iphumelele i "Top 10 kushishino lokukhanya eTshayina", "inkontileka yeSizwe kunye ishishini letyala", "iphondo laseGuangdong iminyaka eli-15 elandelelanayo ukuthobela isivumelwano kunye namashishini amatyala" "Iimpawu ezilishumi eziphezulu zaseYurophu naseMelika zefanitshala yaseTshayina" isihloko.
Ifanitshala kaJames Bond yavela e-Italiyane inegazi elibekekileyo, ibambelela kwisiko, ukhetho olungqongqo lwemathiriyeli, yacocwa, isebenzisa inkqubo yokwenziwa kwe-Italian esulungekileyo, ukuqinisekisa umgangatho obalaseleyo. Ukusuka kwiveneer yeplanga yendalo esulungekileyo ukuya kwipeyinti eqaqambileyo nebengezelayo yepiyano, indawo yolawulo exabisekileyo nenqabileyo...Ngaphandle kokukhetha ukuphefumlelwa kombutho okrelekrele kunye nobugcisa besintu, vumela ifenitshala ibe lilitye elinqabileyo elihombisa ikhaya. UJames Bond obonelela ngegcisa uzuza amakhulu eminyaka yobugcisa kunye nelifa lenkcubeko, ufaka umdlandla kunye nenkuthazo kwindalo yobugcisa, kwaye uzama ukwenza eyona misebenzi yobugcisa igqibeleleyo.
Ifanitshala kaJames Bond izisa ubuhle kwikhaya lakho
Wonke umyalezo wakho liwonga
Ifanitshala yodidi oluphezulu
Itafile yokutyela yeClassic
Umlawuli wentengiso e-Amir Chen
Umnxeba&WhatsApp: +86 131 1272 1616
Idilesi: JAMES BOND FURNITURE, ngokuchasene nesikhululo segesi saseLihai, idolophu yaseLongjiang, isithili saseShunde, Foshan, Guangdong, China.